Address: 14-219 Nanhai လမ်း, ဟွမ်, NanHai,ဖိုရှန်, Guangdong, တရုတ်.
5ply All Clad Body Induction Casserole -sc049 This set is made of 5-ply composited material steel clad with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး, induction compatible.different…
5ply Copper Core Body Flat Pan–sc120 This flat pan is made of 5-ply copper core composited material with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး, induction compatible.different…
Wide Rolled Edge Gourmet Skillet–sc352 This set is very elegent and practical ,သော induction သဟဇာတ. ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်. မော်ဒယ်နံပါတ်: SC352 Place Of Origin: ဂွမ်ဒေါင်း, China Material: Metal Thickness: 0.8MM Shape:…
Wide Rolled Edgestock Pot –sc224 This stock pot is very elegent and practical ,သော induction သဟဇာတ. ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်. မော်ဒယ်နံပါတ်: SC224 Place Of Origin: ဂွမ်ဒေါင်း, China Material: Metal Thickness: 1.0MM…
Foshan New Shanhai Hardware Co. ,, Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး